Ny isan-karazany ny monocrystalline Modules sy polycrystalline Modules manomboka amin'ny hery output,
naorina amin'ny fepetra ankapobeny ho ampiasaina amin'ny karazana on-grid sy off-grid trano fonenana, ara-barotra, indostrialy ary rafitra famokarana herinaratra avy amin'ny masoandro.
Ny maody Solar Panel dia novolavolaina mba hahatohitra ny hafanana tafahoatra sy ny toetr'andro ratsy.
Mifanaraka amin'ny fampiasana ny batteries, dia mivarotra karazana mody monocrystalline sy polycrystalline modules manomboka amin'ny 0.3 W ka hatramin'ny 300 W amin'ny famoahana herinaratra izahay, namboarina ho an'ny fepetra ankapobeny ampiasaina amin'ny trano fonenana an-trano sy ivelan'ny grid, varotra, indostrialy. sy ireo rafitra hafa famokarana herinaratra avy amin'ny masoandro.
Mifanaraka amin'ny fenitra elektrika sy kalitao IEC61215 sy IEC61730 & UL1703 ny maody ataonay.Miaraka amin'ny fanoloran-tena tsy tapaka amin'ny fikarohana sy ny famolavolana, miasa isan'andro ny injenieranay mba hanatsarana ny kalitao, ny fahombiazany ary ny fahatokisana ny maody.Namboarina tao anatin'ny fepetra voamarina ISO 9001, ny maody ataonay dia novolavolaina mba hahatohitra ny hafanana tafahoatra sy ny toetr'andro ratsy.
Modules mahery vaika avy amin'ny 0.3W ka hatramin'ny 300W, manome vahaolana ho an'ny fampiharana isan-karazany.
Ny maody rehetra novolavolaina sy novokarina tany Shina tamin'ny orinasa voamarina ISO 9001.
Ny maodely dia nomena mari-pankasitrahana ho an'ny fanerena rivotra mahery, ny fiantraikan'ny havandra, ny enta-mavesatry ny ranomandry ary ny afo.
Diodes bypass mitambatra mba hiarovana ny fizaran'ny sela masoandro amin'ny toerana mafana mandritra ny alokaloka ampahany.
Ny rafitra aluminium anodized dia manatsara ny fahaiza-manaon'ny enta-mavesatra ho an'ny enta-mavesatry ny rivotra.
Ny teknôlôjia môdely ataonay dia miantoka fa tsy misy olana amin'ny fanamainana ny rano sy ny fikorontanana.
Ny fandeferana herinaratra ambany amin'ny +/-3% dia manampy ny herin'ny famoahana avo kokoa, amin'ny fampihenana ny fatiantoka tsy mifanaraka amin'ny tady module.
Teknolojia sela monocrystalline roa miaraka amin'ny fahombiazana hatramin'ny 18.0%: Ny sela 125x125mm avo lenta ary koa ny sela vaovao 156x156mm dia nanatsara ny fahombiazany sy ny fahatokisana.
Ny fitaratra mangarahara be, ambany vy, ary ny vera mirefodrefotra sy ny antireflective coating dia mampitombo ny vokatra angovo.
Manamaivana ny fako baoritra vaovao ny famonosana ara-tontolo iainana ary mitaky fitateram-bahoaka sy fitahirizana kely kokoa.
Mihatra amin'ny rindranasa ara-barotra, trano fonenana ary fampitaovana.
Tany, tafo, tavan-trano na rafitra fanaraha-maso mora apetraka.
Safidy marani-tsaina ho an'ny fampiharana on-grid sy off-grid.
Mampihena ny faktioran-jiro ary miteraka fahaleovan-tena amin'ny angovo.
Modular, tsy misy faritra mihetsika, azo scalable tanteraka ary mora apetraka.
Famokarana herinaratra azo itokisana sy tsy misy fikojakojana.
Manampy ny tontolo iainana amin'ny fampihenana ny fahalotoan'ny rivotra, ny rano ary ny tany.
Manome famokarana herinaratra madio, mangina ary azo antoka.
Mampitombo ny sandan'ny fivarotana indray ny trano amin'ny andro nametrahana azy.
teo aloha: PV Solar Inverter
Manaraka: CSG Solar Smart Generator
Batterie tsy misy fikojakojana Batterie tsara indrindra ho an'ny rafimasoandro Paneau solaire misy bateria ho an'ny trano Batterie 12v 7ah azo averina Batterie cellule solaire Battery Ups ho an'ny solosaina